Wasiirro iyo xubno kale oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerarka Muqdisho.
Friday February 20, 2015 - 15:02:39 in Wararka by Super Admin
Ilo wareed masuul ah ayaa u xaqiijiyay SomaliMeMo in Wasiirka Gaadiidka ee maamulka DF Cali Axmed Jaamac Jangali iyo xubno kale oo wasiirro ah ay dhaawacyo ka soo gaareen qaraxyadii lagula eegtay hotelka Central magaalada Muqdisho.
Wararka la xiriira khasaaraha oo isi soo taraya ayaa intooda badan la isku halleyn Karin, waxaana wali inoo suuragelin wax war ah oo dhanka khasaaraha inaan ka helno dhanka Xarakada Al-shabaab oo si rasmi ah u sheegtay masuuliyadda weerarka.
Wakaaladda wararka Reuters ayaa dhankeeda shaacisay dhaawaca wasiirrada, waxaana ay ka gaabsatay wakaaladdu iney baahiso magacyada madaxda DF ee goobta ku waxyeelloobay.
Warar sidoo kale la isla dhexmarayo ayaa sheegaya in goobta ay ku dhinteen dad badan oo uu ku jiray kuxigeenki duqa magaalada Muqdisho.
Saraakiil ka tirsan Xarakada Al-Shabaab oo ay soo xigatay Idaacadda Andalus ayaa sheegay in Muqdisho ay ka sameeyeen howlgal qorsheysan oo bartilmaameedsaday saraakiil iyo masuuliyyiin ka tirsan DF, laakin waxey sheegeen dib iney ka faah faahin doonaan khasaaraha weerarka.
Ka sokow waxyeellada uu geystay weerarkan, waxaana hadane dharbaaxo uu ku yahay hey'adaha Ashahaada la dirirka Maamulka DF oo maalmihii la soo dhaafay ay u xirnaayeen waddooyinka qaar ee Muqdisho, hadane ay muuqato ineysan hakin Karin weerarada qorsheysan ee gallaafanaya nolosha xubnaha maamulka DF.